Daawud Ibsaa: ‘Oromoon qabsoo keessatti ilmaan qaqqaalii dhabaa dhufe’ – Ayyaantuu Online
[ June 13, 2021 ] G7 calls for immediate cessation of hostilities in Tigray region	English
[ June 13, 2021 ] ODUU TARKAANFII WBO GGO hanga tokko	Afaan Oromoo
[ June 13, 2021 ] Gaggeessaan Warshaa Sukkaraa Fincaa’aa baajata hojjettoota warshaa sukkaaraa irraa kutuun waraana ppf kenne.	Afaan Oromoo
HomeAfaan OromooDaawud Ibsaa: ‘Oromoon qabsoo keessatti ilmaan qaqqaalii dhabaa dhufe’
Daawud Ibsaa: ‘Oromoon qabsoo keessatti ilmaan qaqqaalii dhabaa dhufe’
Daawud Ibsaa: ‘Oromoon qabsoo keessatti ilmaan qaqqaalii dhabaa dhufe, kan Haacaaluu kun garuu bakka murteessituu kan geesse nutti fakkaata’
(BBC Afaan Oromoo) – Waggoottan darban keessa Oromoon ilmaan isaa qaqqaaliifi kichuu, akkasumas manguddoota qabsoo gaggeessaa ture keessatti dhabeera kan Haacaaluu ammaa kun ammoo bakka murteesituu geese nutti fakkaata jedhan Hayyuu Dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa.
Artistii beekamaafi jaallataamaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamuun dhagahamee namootni hedduun gadda isaanii ibsachaa jiru.
Obbo Daawud ajjeechaan artisti Haacaaluu irratti raawwate ‘’suukaneessaafi kan garaa nama gubudha,’’ jedhan.
Obbo Dawuud gadda guddaan akka itti dhagahame ibsuun maatiifi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwaniiru.
‘’Ajjeechaan kun uummata Oromoo biratti addatti ilaalama. Dhuguma lubbuun namaa waaqaa biratti wal qixa tahus kan Haacaaluu kun uummata Oromoo keessatti qabsoo isaafi jireenya isaa waliin walitti hidhamee ilaalama.’’
Hayyuu Dureen ABO Obbo Daawud ajjeechaa nama Oromoon akka ija isaatti ilaalu kanarratti raawwachuu cimsinee balaaleffanna jedhan.
Obbo Daawu kaleessa galgala akkuma Haacaaluun ajjeefameen komishiniin Poolisii magaalaa Finfinnee namoota muraasni to’atamuu ibsee akka ture yaadachuun, “Faana ajjeechaa mucaa kanaa balleessuu hin qaban”.
‘Lubbuu qaalii, dargaggeessa dinqii dhabne’ – MM Abiy Ahmad
Ajjeechaa Haacaaluu hordofuun hokkora uumameen lubbuun namaa darbe
‘Ani saba kiyyaaf hanga wareegama lubbuuttin yaada’ – Haacaaluu Hundeessaa
Itti dabaluun qaamni walaba taheefi dhimma siyaasaaf hin hojjenne ajjeechaa Haacaaluu irratti raawwate kana qorachuun uummataaf ibsuu qaba jedhan.
Ajjeechaa kana irratti shakkii qabna’’
Obbo Daawud Ibsaa ajjeechaa kana irratti yeroo gabaabduu kana keessatti maqaa dhahuu baannus shakkii qabna jedhan.
‘’Warri Kisaaraan polotikaa irra gahe gurbaa beekamaa kana irratti tarkaanfii fudhatanii kallattii qabsoo jijjiirruun uummataafi uummata wal fuuldura dhaabuuf gochaa godhamedha jennee shakkina.’’
Waggoota dheeraaf kan qabsoofne sabaa fi sablammoota biyya kana keessa jiran hundaaf waan taheef ammas uummataafi uummata gidduu ilaalchi addaa jiraachuu hin qabu jedhan. Oromiyaa keessa uummata saboota garaagaraatu jira kan jedhan Obbo Daawud ajjeechaa kana hordofee walitti bu’insi akka hin uumamne dhaaman.
‘’Sirna irratti malee uummata kam irratti iyyuu qabsoo hin goone.’’ Kanaaf uummatni keenya ilaalcha kana osoo hin jijjiirratiin uummata hundumaaf kabajaa qabaatee qabsoo isaa itti fufuun Haacaaluu eenyu akka ajjeese adda baasuuf hojjechuu qabu jedhan.
Magaalaa Finfinnee keessas dippilomaatotaafi sabaafi sablammii hedduutu jira waan taheef lubbuu fi qabeenya nama hundaa tiksuun barbaachisa jedhan Obbo Daawud.
Kanarratti dargaggoonnii fi uummatni keenya gahee isaa bahachuu qaba jedhan. Dhuma irrattis humni nageenyaa siyaasa waliin osoo wal hin makiin itti gaafatamummaa isaa bahachuu qaba jedhan.
Statement on the Brutal Killing of the Oromo Hero – Artist Haacaaluu Hundeessaa
Jawaar Mohaammad dabalatee namoonni 35 to’annoo oolan
Eessa jirta ?
‘Qaamoleen nageenyaa, aanga’ootni mirga namoomaa sarban gaafatamuu qabu’-HRW